Marketing Courses Online in Myanmar | Online Marketing Training | Khit Pyin Nyar Best Online E-Learning Courses in Myanmar | Khit Pyin Nyar
C Sharp (Part -1)
Free Video : KPN
Course Duration1 hr
လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် Marketing က အခရာကျတယ်ဆိုတာကိုတော့ အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေမှာဖြစ်ဖြစ်၊ Marketing နှင့်ဆက်စပ်သော career ကို စတင်လိုသူများအနေနဲ့ Marketing ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားများကို နားလည်ကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းရလာဒ်များ ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
Khit Pyin Nyar (ခေတ်ပညာ) မှ ဖွင့်လှစ်တဲ့ Business Marketing online class ကို တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ။
အလုပ်အကိုင်မပြတ် မိမိအားလပ်ချိန်မှာ လေ့လာနိုင်ဖို့ ရှင်းလင်းလွယ်ကူတဲ့ video များနှင့်တကွ သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တတ်မြောက်မှုကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် Quiz လေးများလဲ ထည့်ထားပေးလို့ ကိုယ်တိုင်ဘယ်လောက် နားလည်သွားသလဲဆိုတာကိုလဲ ဆန်းစစ်နိုင်မှာပါ။
Product, Services and Information
Technological, Political and Marketing Environment
ဒီ online class ကို သင်ယူပြီးရင် ဘာတွေတတ်မြောက်သွားနိုင်မှာလဲ?
Khit Pyin Nyar မှ ဖွင့်လှစ်တဲ့ Business Marketing သင်တန်းကိုတက်ရောက်ပြီးပါက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ အဓိကကျတဲ့ Marketing နှင့်ပတ်သက်သည့် ‌‌‌‌‌ေ၀ါဟာရများ ၊ အခြေခံ သီအိုရီနှင့် အချက်အလက်များ ၊ သဘောတရားများကို နားလည်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို မိမိလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဈေးကွက်ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ရန် လည်း လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
တိုးတက်မှုလမ်းစကို အချိန်တိုင်းရှာဖွေလိုသူများအတွက် Khit Pyin Nyar (ခေတ်ပညာ) Online Learning Platform မှာ စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူနိုင်ပါပြီ။
ဘယ်လို enroll လုပ်နိုင်မှာပါလဲ?
တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် www.kpn.com.mm မှာ enroll လုပ်ပြီး ဝယ် ယူရရှိနိုင်ပါပြီ ၊ Enroll ပြုလုပ်လို့ရရင်ဖြင့် Khit Pyin Nyar (ခေတ်ပညာ) မှ မိမိ ဝယ်ယူထားသော Video သင်ခန်းစာများကို တစ်နှစ်အတွင်း Access လုပ်ခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
Khit Pyin Nyar
Phone : 09 5100082
Website : www.kpn.com.mm
Email : khitpyinnyar@mwdtelecom.com
Office : Block-10 , MICT campus, Hlaing Township, Yangon.
Please submit your coupon code or Buy Course. Coupon code
Phone : + 95 09 5100082